थप १२ ठाउँमा सुरुङमार्ग बन्दै, अध्ययनलाई कति बजेट ? - Everest Dainik - News from Nepal
थप १२ ठाउँमा सुरुङमार्ग बन्दै, अध्ययनलाई कति बजेट ?
काठमाडौं, असार २१ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १२ ठाउँमा सुरुङमार्गको अध्ययन गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । नौबिसे–नागढुंगा, सिद्धबाबा, खुर्कोट–चियाबारी, कुलेखानी–भीमफेदी, हेम्जा, लामाबगर, गुर्जेभञ्ज्याङ, दाउन्ने, थानकोट–चित्लाङ, कोटेश्वर–जडीबुटीलगायत स्थानमा सुरुङमार्ग बनाउन लागिएको हो ।
बुटवल–पाल्पा खण्डको सिद्धबाबा र नौबिसे–नागढुंगा सुरुङमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ । यी दुवै ठाउँमा निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् । सिद्धबाबाको स्विस सरकारले अध्ययन गरेर विभागलाई बुझाइसकेको छ ।
याे पनि पढ्नुस सांसदलाई ९ अर्ब ९० करोड बाँडिने, प्रत्येकको भागमा कति?
जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले अध्ययन गरेको नौबिसे–नागढुंगाको काम केही दिनभित्रै अघि बढ्ने सडक विभाग गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका निर्देशक शिव नेपालले जानकारी दिए । ‘बाँकीको पनि प्रारम्भिक अध्ययन सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यस आर्थिक वर्षभित्र सबैको अध्ययन सकिन्छ ।’ मन्त्रालयले सुरुङमार्गको प्रारम्भिक अध्ययनका लागि १ अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो।
याे पनि पढ्नुस विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित
ट्याग्स: Budget, surung marga